BreakingNews: Kooxda Real Madrid oo diyaar u ah iney Aguero kala soo wareegto Man City | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » La Liga Spain » BreakingNews: Kooxda Real Madrid oo diyaar u ah iney Aguero kala soo wareegto Man City
BreakingNews: Kooxda Real Madrid oo diyaar u ah iney Aguero kala soo wareegto Man City	Kooxda Real Madrid ayaa si lama filaan ah ugu dhaqaaqeysa saxiixa weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero.
Naadiga hogaanka horyaalka Spain haysa ayaa si weyn udooneysa xidigan qaranka Argentine iyadoo la aamisan yahay in xidigan uu albaabka Etihad ka baxayo kadib markii uu dhadhamiyay keydka kooxdaas.
28 jirkaan Aguero ayaanan ku faraxsaneyn inuu keyd u ahaado xidiga City ugu fadhiya £26m ee reer Brazil Gabriel Jesus.
Tababare Pep Guardiola ayaase sheegya ineysan wax fudud aheyn in weeraryahankan Aguero uu yahay mid uu aad ujecel yahay.
Guardiola ayaa sheegay in Aguero uu ka fogyahay in la iibiyo, hase ahaatee kooxda Real Madrid ayaa isha ku haysa in xidigan ay ku xalliso dhibaatada dhanka weerarka ka haysata ee Karim Benzema iyo Alvaro Morata.
Kooxdiisi hore ee Atletico Madrid ayaa sidoo kale xiiseyneysa xidigan, hase ahaatee Real ayaa ilaa haatan ugu horeysa kooxaha doonaya.
Macalin ZIDANE ayaa haysta fursad uu xidigan ku geeyo Madrid iyadoo uu Aguero uu diyaar uyahay inuu ka tago kooxdiisa hadii uu boos joogta ah waayo inkastoo heshiiskiisa kooxda uu dhacayo 2020-ka.
Kooxaha Inter, Juventus iyo Paris Saint Germain ayaa sidoo kale muujinaya xiisaha ay uqabaan weeraryahankan halista ah.
Antoine Griezmann, Benzema, Morata, Paulo Dybala iyo Pierre-Emerick Aubameyang ayaa la filayaa in dhamaadka xili ciyaareedkan ay saameyn weyn ku yeshaan suuqa kala iibsiga
Laakiin in Real Madrid ay lasoo saxiixato Aguero ayaa ugu danbeyn macquul ah kadib markii ay mudooyin badan heshiiskiisa ku guul dareysteen.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/breakingnews-kooxda-real-madrid-oo-diyaar-u-ah-iney-aguero-kala-soo-wareegto-man-city/">BreakingNews: Kooxda Real Madrid oo diyaar u ah iney Aguero kala soo wareegto Man City</a>